Rally Dirt: Ny lalao hazakaza-tsoavaly Linux izay efa mandroso | Avy amin'ny Linux
Tsy mampiasa Linux aho satria tsy misy lalao ho an'io rafitra miasa io!, ity dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo andianteny henontsika indrindra tahaka ireo izay manandrana mitaona olona vaovao hiditra amin'ny tontolon'ny Linux mahafinaritra sy rindrambaiko maimaimpoana, ary tsy ratsy ny mihaino azy satria fantatsika ny lesoka izay mbola ananan'i Linux amin'ny iray amin'ireo faritra izay tena manintona mpampiasa solosaina. Ankehitriny, isan'andro lalao izay azo tanterahina amin'ny rafitra fiasanay maimaim-poana ary manome fahombiazana lehibe, mety somary miadana ny asa, fa miandalana kosa mandeha lavitra.
Amin'ity fizotran'ny fampidirana lalao vaovao izay mifanaraka amin'ny Linux ity, izay nanome ny be indrindra fandraisana anjara dia Steam, izay manolotra antsika ny fahafinaretana amin'ny Dirt Rally amin'ny Linux, miaraka amin'ny sary tsara, fampisehoana ambony ary ambonin'izany rehetra izany amin'ny filalaovana mampihetsi-po.
1 Inona no atao hoe rallye Dirt?
2 Fampisehoana sy famerenana Dirt Rally amin'ny Linux
3 Ahoana no hividianana Rally Dirt?
Inona no atao hoe rallye Dirt?
Izany dia lalao hazakazaka izay manodidina ny zava-nitranga tao fivondronan'ireo, izay ahafahan'ny mpilalao mifaninana amin'ny hetsika ara-potoana mitondra fiara tsy mampino na amin'ny lalana asfalta na amin'ny tanety izay misy toetr'andro sarotra. Izy io dia manana andiana fiara, làlan-kaleha ary maodin-dalao, izay ivoaranao rehefa mandresy ireo fitsapana sarotra napetraka taminao ianao.
Ny sary sy ny fanodikodinan'ny lalao dia mahatonga ny mpilalaony hankafy fahatsapana mitovy amin'ny tena zava-misy, hoy ny lalao mifanaraka amin'ny fanaraha-maso ivelany izay miasa toy ny familiana, pedal, lever ankoatry ny hafa.
Ity lalao ity dia novolavolaina tany am-boalohany ho an'ny Windows ary taty aoriana dia nozaraina ho an'ny sehatra hafa toy ny playStation 4, Xbox One ary ireo vao haingana kokoa ho an'ny rafitra fiasa Linux.
Fampisehoana sy famerenana Dirt Rally amin'ny Linux
Tsara tarehy sy mahafinaritra ity lalao hazakazaka ho an'ny Linux Nanaiky be ny fiaraha-monina tamin'ny ankapobeny, izay tamin'ny tranga maro dia nitodika tany amin'ny Windows izy mba hankafy azy io, fa ankehitriny dia ho afaka handany ireo fiasa rehetra amin'ny fampisehoana azo eritreretina.
Zavatra iray tsy maintsy raisina rehefa mankafy ny Dirt Rally amin'ny Linux, dia indrisy fa tsy maintsy mihaona toetra amam-pitaovana isika mba hahafahany mampandeha azy, ny iray izay heveriko fa sarotra tanterahina indrindra dia ny carte de vidéo ambony noho ilay iray. NVIDIA 650ti 1GB (raha ny marina dia maro amin'ireo fitaovana ankehitriny no mahafaly azy tsy misy olana), fa amin'ny lafiny iray dia mila ondrilahy 8 gb koa isika.
Dirt Rally dia manolotra maodin-dalao maromaro, manomboka amin'ny hazakaza-be ka hatramin'ny fifaninanana rallycross sarotra, amin'ny fomba mitovy, manolotra antsika ny mety hisian'ny hazakazaka marobe, Fahafinaretana?
Raha hiditra lalindalina kokoa amin'ireo fiasa, fampisehoana ary lalao amin'ny lalao isika dia afaka mahita ireto horonantsary manaraka ireto, izay azoko antoka fa ho tianao.
Ahoana no hividianana Rally Dirt?
Dirt Rally dia lalao mitentina 30 $ mahery, izay tsy isalasalana fa manolotra fiasa marobe izay manamarina tsara ny sandan'ny varotra. Raha hividy ny lalao dia azonao atao izany amin'ny fivarotana etona toy ny ao amin'ny magazay maloto.
Tsara ny manamarika fa raha hilalao Dirt Rally amin'ny Linux isika dia tsy maintsy manana Steam napetraka, noho izany dia azonao atao ny manaraka ny sasany amin'ireo fampianarana natao. Eto ao amin'ny bilaogy.
Tsy mila manantena fotsiny isika fa afaka mankafy ity lalao mahafinaritra ity izy ireo ary mbola maro ny manohy tonga, handrava ireo sakana misakana ny Linux eo amin'ny birao tsy ho malaza kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » Rally Dirt: ny lalao hazakazaka Linux izay no fahatezerana rehetra
B-Lion dia hoy izy:
Lalao tsara tarehy!
Mamaly an'i B-Lion
Eny tsara tarehy.
Valio i tomeu
Lahatsoratra tena tsara, androngo. Azo antoka fa lalao lehibe io, iray amin'ireo tsara indrindra hitantsika tao amin'ny rafitray nefa tsy isalasalana. Ho fanampin'izay, ny fahombiazana dia mahagaga fa tsara, saika mifanitsy amin'ny kinova Windows, ilay rafitra nivoahany. Izahay ao amin'ny JugandoEnLinux.com dia nanokana fanadihadiana tsy dia ela akory izay. Raha mikasa ny hividy ity lalao ity amin'ny rafitray ianao dia afaka mahita an'ity rohy ity: